I-Sapling Cabin eyenziwe nge-Evergreen Forest Cabins - I-Airbnb
I-Sapling Cabin eyenziwe nge-Evergreen Forest Cabins
Ifakwe phakathi kwe-Hemlocks i-The Sapling Cabin. Lesi sikhala sezindaba ezimbili esincane sigcwele umlingiswa nezici ezitholakala ezindaweni ezinkulu kakhulu. I-Sapling inobhavu oshisayo wangasese omusha, izinto zikagesi ezingenasici, nombhede wenkosi. I-acreage yethu inikezela ngendawo yasemakhaya eseduze okumangalisayo nezinsiza zedolobha futhi okubaluleke kakhulu, iPacific Rim National Park (amayadi angama-500). Sihamba ibanga lokuya e-Pacific Rim National Park's Florencia kanye ne-Half moon bay beach trails.
I-Sapling Cabin ihlonyiselwe ukwenza ukuhlala kwakho kuthokomele futhi kungabi nandaba.
Igumbi lokugezela elivalekile elakhiwe ngomsedari linamathele ohlangothini lwekhabhinethi futhi lifinyeleleka ngaphandle. Ifaka ukukhanya kwesibhakabhaka, ikhanda leshawa lemvula futhi isebenza njengeshawa evamile. Izikrini zobumfihlo zikhona ukuze zivimbe imigqa yokubuka endleleni yethu edlula ikhabethe.
Ikhishi linikeza isiqandisi esisha sensimbi engagqwali nesiqandisi esikhulu esingezansi.
I-cookware inikezwa isitofu se-propane futhi sigcina ikhishi ligcwele zonke izitsha zakho eziyisisekelo kanye ne-cutlery.
Sinikeza amaphakethe ekhofi agazingiwe endaweni avela e-West Coast Roasters kanye nezikhwama zetiye ukuze uhambe ekuseni ngonyawo olungakwesokudla.
Ubhavu omusha oshisayo we-Sapling ulungele ukucwiliswa kusihlwa. Sicela ukuthi AKUKHO IGALASI engayenza noma kuphi eduze nebhavu. Sicela usebenzise izingilazi zewayini zepulasitiki noma izinkomishi ezinikeziwe. Ubhavu oshisayo uhlala emphemeni ngaphandle komnyango oslayidayo ozungezwe ama-hemlocks.
Igumbi lokulala eliphezulu lifinyelelwa ngezitebhisi. Sicela umelane nesifiso sokudlula ngezitebhisi njengezitezi ezivamile. Sicela udlule kuphela iladi elibheke ezitebhisini eziya phezulu naphansi.
4.90 · 235 okushiwo abanye
Indawo esihlala kuyo yakhiwe ngezindawo zokuhlala ezinkulu futhi iningi lazo elisezihlahleni. Indawo yethu ihlukile ngenxa yezindawo ezizimele zasemakhaya kuyilapho ukumizuzu emihlanu kuphela ukusuka edolobheni. Ukusondela kwePacific Rim National Park (ibanga lokuhamba), kanye ne-Wild Pacific Trail Trailhead kuyibhonasi enhle kulabo abathanda ukuhlola.
Senza konke esingakwenza ukuze sinikeze izivakashi zethu indawo nobumfihlo ngesikhathi sokuhlala kwazo. Asikushayeli ucingo uma udinga okuthile phakathi nokuvakasha kwakho. Kusukela kuseluleko sendawo ukuya ekuxazululeni noma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame, Sizoba lapho.
Senza konke esingakwenza ukuze sinikeze izivakashi zethu indawo nobumfihlo ngesikhathi sokuhlala kwazo. Asikushayeli ucingo uma udinga okuthile phakathi nokuvakasha kwakho. Kusukel…